Jordania: Reema, Tsy avelanay ho zava-poana ny fahafatesanao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2010 7:06 GMT
Nanokatra ny teniny miaraka amin'ny tantaran'ny maty mampangotsoka sy mampihetsi-po nosoratany ho an'ny nenitoany ny mpitoraka blaogy Aboosh.
Andro vitsy lasa izay, tany amin'ny fari-piadidian'i Jerash , any Jordania, novonoin'ny vadiny nandritra ny torimasony i Reema [Ar]. Ny antony namonoana azy ? Nihevitra ny vadiny fa “tratry ny mosavy ” ny vady andefimandriny ka mety ho izy no hovonoiny voalohany; nilaza izy fa lehilahy “azo antoka tsara” no nilaza taminy fa nidiran'ny tromba-na mpamono olona ny vady andefimandriny.
Manoritra ireo olan'ny fanamelohana any Jordania i Jansait, toerana izay ahitana vehivavy manana làlana kely hidirana mankamin'ny fiarovana ara-pianakaviana , ary azo ampiasaina ho antony iray migeja azy ny fitandroana ny ‘hajany ‘ amin'ireo trangana vono olona .
Ary nanao hetsika ny olona ao amin'ny Womens Rights on change.org ka nanomboka nanangon-tsonia mba hanandratana ny fahatsapan-tena sy hanerena ny governemanta mba hanao fanovana. Toy izao ny vakiny:
Fanampin'ny fanovana eo amin'ny lalàna, ilay fanangonan-tsonia dia miantso ny rafi-pitantanana mikasika ny fahafaha-miditra amin'ireo toby fialokalofana sy ireo ivontoerana ho famahana olana ho an'ireo vehivavy iharan'ny herisetra na an-drenivohitra na any amin'ny faritra ambanivohitra. Azo atao sonia eto.
Namela hafatra anjatony maro ireo mpamaky mikasika ny vaovao voatatitra momba ny fahafatesan'i Reema izay maneho ny alahelony, ary maneho ny fiaraha-miory, toy izao :